Fanatsarana tena - Mahagaga Mag
Tattoos: milanja ny tombony sy ny lafy ratsy
by Rosina D.
Oktobra 4, 2019
Ny tatoazy dia nanjary mahazatra kokoa noho ny taloha. Soa ihany fa nanana tatoazy, nanomboka ny hihoatra ny stereotype ny maha marika famantarana azy ho voa ratsy, mpikambana ao amin'ny gang, na karazana mpikomy hafa. Androany, na lahy na vavy tsy…
Ny fiarovana dia tsy tokony hojerena na oviana na oviana rehefa mampihatra devoly
Jolay 2, 2019
Ireo orinasa manerana an'izao tontolo izao dia mandray ny automatisation DevOps. Ny singa fototra mitondra ny fahombiazan'ny DevOps dia ny mamela ny orinasa hahazo tombony be dia be ny DevOps. Manomboka amin'ny fifantohana bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny vokatra ka hatramin'ny fahaizana…
Marary foana ve ny zanakao? Antony 4 Mety ho ny Culprit ny tranonao
Febroary 23, 2019
Ny marary dia zavatra mahazatra. Ny ankamaroan'ny olona dia mandalo azy io indraindray, fa indraindray ny aretina dia mety hanjary be loatra. Ireo izay mahatsikaritra fa marary ny zanany matetika dia mety te-hijery raha ny tranony no mahatonga izany. Mazava ho azy, jereo…
Ahoana ny fomba fananganana môtô nofinofinao manokana?
Ny fananganana fitaovanao fitaterana ho anao dia nahaliana ny ankamaroan'ny rajako be menaka hatrizay nampidirina tamin'ny besinimaro ny motera fandoroana anaty. Raha vantany vao hitan'ny olona ny asany rehetra, tsy nisy fijanonana tamin'ny fanafihana nataon'ny…
Be loatra ve ny fahazarana maraina?
by Johnny E.
Janoary 9, 2019
Ny fahazarana maraina dia miasa ho an'ny olona marobe satria manampy azy ireo hitsambikina-hanomboka ny androny ary hanomboka amin'ny fanamarihana tsara sy mahomby. Na izany aza, ny fanazarana maraina (indrindra fa ny mahery) dia tsy an'ny rehetra. Raha ny marina, ny fahazarana maraina dia be loatra noho ny antony maro samihafa… Tsy ny rehetra…
Vokany manan-danja amin'ny famongorana ny orinasa mpiara-miasa
Desambra 4, 2018
Ny valin'ny fitsikerana ny orinasam-pikambanana dia toy izao: Mizotra amin'ny mety hisian'ny mpiray tsikombakomba aorian'ny fandravana azy (Andininy 45): Na eo aza ny fanaparitahana orinasa iray, ireo mpiray tsikombakomba dia mitandindomin-doza hatrany araka ny filazan'ny avy any ivelany ny asa rehetra ataon'izy ireo…
Fikarakarana ireo olon-tiana: toro-hevitra hanampy amin'ny fikarakarana tokantrano
Novambra 30, 2018
Raha iray amin'ireo tombanana ho 65.7 tapitrisa amerikana manome fikarakarana ho an'ny mpianakavy ao an-tranonao ianao, dia fantatrao fa izany dia traikefa nahafinaritra tokoa izay matetika miaraka amin'ny fanamby tsy manam-paharoa. Azonao ampiasaina ireto torohevitra ireto mba hanampiana hikarakara…
Fisorohana ny lesoka mahazatra, ny fahalavoana ary ny fandrika
Novambra 14, 2018
Ny fampandehanana orinasa dia midika hoe mandray fanapahan-kevitra. Ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara dia vokatra tsara ho an'ny orinasanao, indrisy anefa fa misy karazan-javatra mijoro eo anelanelanao sy ireo fanapahan-kevitra tsara tokony raisinao. Raha tsy hoe tsy manana fampahalalana ilainao fotsiny…
Orinasa 101 - Fomba azo antoka hanaovana afo ny fampiroboroboana varotra anao voalohany
Novambra 12, 2018
Ny seho ara-barotra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana orinasa ary rehefa tonga ny seho ara-barotra voalohany dia lasa zava-dehibe kokoa izany hahombiazany. Satria hiatrika ireo mpifaninana aminao ianao ary hanadihady akaiky ny tsena.…
Torohevitra hampidirina ao an-dakozia ny zanakao
Jolay 11, 2018
Mandefa ny zanakay any an-tsekoly izahay mba hianarany lohahevitra isan-karazany ary hifidy ny làlan'ny asa mety. Saingy, ahoana ny amin'ny fanabeazana tena izy, izay tena hanampy azy ireo hiaina eto amin'ity tontolo ity? Izany no zavatra ianaran'ny ankizy tsirairay ao aminy…
1 2 3 ... 5 Manaraka